Madaxweynaha Soomaaliya oo wadahadal la yeeshay dhigiisa Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya oo wadahadal la yeeshay dhigiisa Uganda
12th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kampala – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Muzevani ayaa xalay ku kulmay aqalka madaxtooyada dalkaasi, kadib markii shalay uu halkaas gaaray madaxweyne Xasan Sheekh.
Labada masuul ayaa kawada hadlay xiriirka labada dowladood iyo arimo ku saabsan ciidanka Amisom, waxaana kulanka goob jog ka ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, taliyaha ciidanka xoogga dalka Jen. Daahir Aadan Cilmi oo safarka Madaxweynaha ku wehliya.
”Madaxaweyne Xassan si weyn ayaa loo soo dhaweyey markuu gaaray Uganda, waxuuna shir la qaatay madaxweynaha Uganda Yuweri Muzevani, waxaana ay ka wada-hadleen xiriirka labada dowladood iyo arimo ku saabsan ciidanka AMISOM”ayuu yiri mas’uul u hadlay madaxtooyada Soomaaliya.
Waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ah la-dagaallanka Al-shabaab, waxaana la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu markale Uganda ugu mahad-celiyey taageerada dhinaca milateriga, maadaama Uganda ciidamada ugu badan ee AMISOM ay leedahay.
Wasiirka gaashaandhiga iyo Taliyaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed, ayaa dhanka kalke la kulmay taliyaha ciidanka Milateriga dalka Uganda iyo wasiirka Gaashaandhiga dalkaasi oo ay kala hadleen sidii loosii wadi lahaa howlgalka AMISOM ee dalka Soomaaliya, maadaama miisaanka ugu culus ee howlgalkan dowladda Uganda ay ku leedahay.
Safarka Madaxweynaha dalka Uganda uu ku tagay ayaa qaadanaysa muddo hal cisho ah, waxaana suuragal ah in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isla maantaba dalka dib ugu soo noqdo.
Somalia:More police and intelligence officers to be deployed at Lower Shabelle region